कस्तो होला ‘मिस्टर भर्जिन’ ? - Glamorous Icon
२४ श्रावण २०७५, बिहीबार १३:०७
Home›GIcon News›कस्तो होला ‘मिस्टर भर्जिन’ ?
प्रदर्शन मिति दिनप्रतिदिन नजिकिँदै गर्दा भाद्र १ गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउन लागेको यौन मनोविज्ञानमा आधारित फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’ ले आफ्नो प्रचारलाई तिव्र बनाएको छ । कलाकारसहितको निर्माण टिम यतिबेला मोफसल टुरमा छ ।
बुधवार चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता गौरव पहारीले फिल्मको नाम ‘मिस्टर भर्जिन’ भएकै कारण कसैले पनि नाक खुम्च्याउन नपर्ने बताए । ‘म प्रायः फरक जनराको फिल्म गर्दै आइरहेको छु । र, ‘मिस्टर भर्जिन’ मा पनि मेरो भूमिका फरक पाउनुहुन्छ’, उनले भने ।
यौन मनोविज्ञानमा आधारित रहेर नेपालमा पहिलो पटक सेक्स कमेडी बेसको फिल्म बनेको उनले बताए । पहारीले फिल्मको ट्रेलर हेरेर गाली गर्नेहरुको फिल्म हेरेपछि मन बदलिने समेत बताए ।
अभिनेत्री मरिश्का पोख्रेलले ‘मिस्टर भर्जिन’ मा आफूले कल गर्लको भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । उनले कल गर्लको भूमिकालाई न्याय दिन आफूले कल गर्लहरुको जीवन र दैनिकी बारे पनि लामो अध्ययन गरेको बताएकी छन् ।
फिल्मको प्रस्ताव आउँदा के सोच्नुभएको थियो ? पत्रकारको प्रश्नमा उनले नामलाई लिएर आफ्नो कुनै आपत्ति नभएको बताइन् । ‘मलाई नाममा केही आपत्ति थिएन । कथा सुनेपछि त झन् मैले यो फिल्म छाड्नु हुन्न भन्ने लाग्यो, त्यसैले काम गर्न राजी भएँ’, मरिश्काले भनिन् ।
कलाकार कमलमणी नेपालले फिल्मले दिन खोजेको कन्टेन्ट निकै राम्रो भएको कारण आफूले ‘मिस्टर भर्जिन’ मा काम गरेको बताए । उता निर्माता प्रजापती सिवाकोटीले ‘मिस्टर भर्जिन’ राम्रो बनेको भन्दै दर्शकलाई एकपटक हेर्न आग्रह गरे । उनले फिल्म नहेरी कमेन्ट गर्नु भन्दा हेरेर मात्र कमेन्ट गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।